တနေ့သ၌...ကွဲကွာနေခဲ့ သော မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဟောင်း များ ဘီယာဆိုင်တွင်ပြန်တွေ့ ကြလေသည်။
ဆိုင်တွင်ဘီယာသောက်ရင်း သူငယ်ချင်း (ယခု ပုသိမ်ကြီးတွင်နေသူ ခေတ်ဒွေး ) တစ်ယောက် ရှိုးစမိုး အပြည့်ဖြင့်ရောက်လာသောကြောင့် ကျွန်တော်ချီးကျူးလိုက်မိသည်။
အေးကွနော်.. မင်း က ကြီး မှ လှလာတာကွ.. ဘယ်လို ပြောမလဲ ဒေါင်းမျိုး ဆိုလား..
သူငယ်ချင်းမှာလည်း ထောင်ထားသော ဆံပင်ကို အနည်းငယ်သလိုက်ပြီးနောက် တဟဲဟဲ ဖြင့် ၀င်ထိုင်သည်။
သူများအား မှိုချိုမျစ်ချိုးပြောတတ်သော ဆင်ဖြူကျွန်းဆရာသက် ခေါ် ချက်ခိုင် ရှိသောကြောင့် သူ့ ခမျာ သိပ်လည်းမမြောက်ရဲ ပေ။
ဆရာသက် ကဘီယာကို တစ်ငုံစုပ်လိုက်ရင်းသူ့ ဘက်လှည့်၍ ကျွန်တော့်စကားကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံလိုက်သည်။
ဟုတ်တယ် သယ်ရင်းရာ မင်း က တကယ့်ကို အသက်အ၇ွယ်ရလာမှ ပိုပြီးကြည့်ကောင်းလာတယ် .. ဒေါင်းမျိုးဆို တာ ထက် လောက်မျိုးဖြစ်မယ် ..
မစင်ကြားထဲနေခဲ့ရပေမယ့် အခုတော့ အတောင်အလက် အစုံအလင်နဲ့ယင်ကောင်ဖြစ်နေခဲ့ပြီပဲကိုး ကွ..
Posted by MrDice at 12:21 AM0comments Links to this post
UCSM First Batch မှ သူငယ်ချင်းများသို့
(၁) ဒီစာစုလေးဟာ ကျွန်တော် အချိန်နည်းနည်းရပြီး အားအားယားယား
ဖြစ်နေလို့ အပျော်သက်သက်ရေးထားတာ ဖြစ်ပါသည်။
(၂) သူငယ်ချင်းတို့ အချိန်ရတယ်၊ အားတယ်၊ Entertainment တစ်ခုခုလည်း
လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှ ဒီစာစုလေးကို ဖတ်ပါ။
(၃) ဒီစာစုလေးဟာ ပျော်ရွှင်စရာ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုသက်သက်ဖြစ်ပါသည်။
(၃) ဒီစာစုလေးထဲမှာပါဝင်သော အကြောင်းအရာများအားလုံးသည်
ကျွန်တော်၏ စိတ်ကူးမျှသာဖြစ်ပြီး အပြင်မှာ လုံးဝမဖြစ်ခဲ့ပါ။
(၄) ဘယ်သူငယ်ချင်းကိုမှ နစ်နာစေလိုသောစိတ် အလျဉ်းမရှိပါ။
သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် သတိရပြီး၊
Stress တွေ လျော့နိုင်ပါစေ။ ပျော်ရွင်နိုင်ပါစေ။
(၆) UCSM First Batch မှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တကယ်ကို သတိတရ ရှိရပါကြောင်းနဲ့
အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေကြောင်း . . . ။
အချိန်ကာလ - ၂ ၀ ၂ ၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၂ ၄ )ရက်။
နေရာ - မန္တလေးမြို့၊ လူကုံထံများသာ နေသောရပ်ကွက်ရှိ
အထူးကြီးမားလှစွာသော ခေတ်မီအိမ်ကြီး၏ မဟာဧည့်ခန်း။
ဖေဖေ - တော် ပြီသမီး၊ ဆက်မပြောနဲ့တော့။ ဖေဖေမကြားချင်တော့ဘူး။
သမီးကို မိုးကုတ်က ဖေဖေ့မိတ်ဆွေ ကျောက်တွင်းသူဌေးရဲ့သားနဲ့ပဲ
သမီး - အဲဒီလိုတော့ မရက်စက်ပါနဲ့ ဖေဖေရယ်။ သမီး မချစ်တဲ့သူနဲ့တော့
ဖေဖေ - သမီး ဘာတစ်ခွန်းမှ ဆက်မပြောနဲ့တော့။ ဖေဖေ့ရဲ့ စေတနာတွေ
သမီး - သမီးက စက်ရုပ်မဟုတ်ဘူးဖေဖေ။ အသည်းနှလုံးရှိတဲ့လူ။
ဖေဖေ - တိတ်စမ်း။ သမီးက လောကကြီးအကြောင်းကို ဘာမှ မသိသေး
ဘူး။ မတော်တာတွေနဲ့ တွေ့သွားမှာစိုးလို့ ဖေဖေက ပြောနေရ
တာ။ ဒါကို သမီး နားလည်ရဲ့လား။
( ဧည့်ခန်းရှိ ရွှေသားအတိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောတေဗယ်ပေါ်ရှိ
စကော့တလန်မိတ် ဒိုင်းမွန်းလေဗယ်ဝီစကီကို စိန်သားဖြင့် ပြုလုပ်
ထားသောခွက်အတွင်းသို့ ထည့်ပြီး တစ်ကျိုက်မော့လိုက်သည်။ )
သမီး - ဖေဖေပေးစားမယ့်သူကို သမီး မယူနိုင်ဘူး ဖေဖေ။
ပြီးတော့ အခုခေတ်မှာ မိုးကုတ်ကျောက်တွင်းသူဌေးသားဆို
မေမေ - ကိုရယ် စိတ်ကိုလျှော့ပါဦး။ သမီးရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို
မိန်းမတို့လည်း ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ရွေးခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်လား။
ဖေဖေ - မင်းဝင်မပါနဲ့ မိန်းမ။ သမီးက မင်း အလိုလိုက်ထားလို့ အခုလိုဖြစ်နေတာ။
မေမေ - ဒါဆို ဖေဖေသဘောတူနိုင်အောင် ဖေဖေ့သူငယ်ချင်းထဲက
သမီး - အဟင့်.. ဟင့်.. သမီးကလည်း အဲဒါပဲ ပြောမယ့်ဟာကို။
ဖေဖေ့သူငယ်ချင်း ဦးနေမျိုးထွန်း ရဲ့ သားနဲ့ဆိုရင်ရော
ဖေဖေ - ဘာ! ဦးနေမျိုးထွန်းရဲ့ သား . . ဟုတ်လား။ ဖေဖေ
သဘော မတူနိုင်ဘူး။ အဲဒီ ဦးနေမျိုးထွန်းရဲ့သားက သမီးထက်
လည်း အသက်ကြီးနေပြီ။ ပြီးတော့ သူ့ဖေဖေနဲ့ မေမေက ၀ိတ်
တက်မှာစိုးလို့ သူတို့ကျ မစားဘဲ သူ့တို့သားကိုပဲ တအားကျွေးနေ
လို့ သူတို့သားက အစားတွေ တအားစားပြီး၊ ကွန်ပျူတာဂိမ်း တွေ
တအားကစားလို့ ဖက်တီးပုပ်ကြီးဖြစ်နေပြီ သမီးရဲ့။
ပြီးတော့ သူ့အဖေအကြောင်းလည်း ဖေဖေအသိဆုံး
သမီး - အဟင့်.. ဟင့် . . အဲဒါဆို ဦးအောင်ထက် ရဲ့ သားဆိုရင်ကော။
ဖေဖေ - ဘာ! ဦးအောင်ထက်ရဲ့ သား.. ဟုတ်လား။ ဖေဖေ
သဘောမတူဘူး သမီး။ အဲဒီ ဦးအောင်ထက်ရဲ့သားက ငယ်ငယ်
က ဂျိန်းစဘွန်းလိုလို၊ ကောင်းဘွိုင်လိုလို မျက်မှန်တပ်ပြီး သေနက်
တစ်လက်နဲ့ သောင်းကျန်းတဲ့ပုံတွေ ဖေဖေ Face Book မှာ
တွေ့ဖူးတယ်သမီး။ ဒါပေမယ့် သူ့ဖေဖေ က သူ့မေမေ ကိုရဖို့
ကြိုးစားခဲ့သလိုမျိုး သူ့သားက သမီးကို ကြိုးစားလာရင်တော့လည်း
ဖေဖေ စဉ်းစားမယ်။ သူ့ဖေဖေ ဦးအောင်ထက်ဆိုတာ သူ့မေမေ
ဒေါ်သီရိမျိုးလှိုင်ကို ရဖို့ အင်မတန်ကြိုးစားခဲ့ရတာ သမီးရဲ့။
နောက်ဆုံး ကျောင်းကဗျာစာအုပ်မှာ အောင်ထက်(P.K.U)ဆိုတဲ့
ကလောင်နာမည်နဲ့ ပခုကúLမြို့က ငယ်သံယောဇဉ်တွေအကြောင်း
ကဗျာလေးထည့်ရေးမှ အဆင်ပြေသွားတယ်ထင်တာပဲ သမီးရယ်။
သမီး - အဟင့်.. ဟင့် . . အဲဒါဆို ဦးဥကúúúúာမျိုး+ဒေါ်ခင်ဖြိုးသန့် တို့ရဲ့
ဖေဖေ - ဘာ! ဦးဥကúာမျိုးရဲ့ သား.. ဟုတ်လား။ ဖေဖေ သဘောမတူ
နိုင်ဘူး သမီး။ အဲဒီ ဦးဥကúာမျိုးဆိုတဲ့လူက ဘာမှ အပင်ပန်း
မခံနိုင်ဘူး သမီးရဲ့။ ဟိုးအရင်တုန်းက ဖေဖေက သူ့ကို
လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ဖို့ ချိန်းတုန်းကလည်း ချိန်းတဲ့
သူ့မိန်းမအိမ်မှာတဲ့။ ဖေဖေချိန်းတဲ့ (၁၉)လမ်း မင်းသီဟ
လက်ဘက်ရည်ဆိုင်နဲ့ သူ့မိန်းမ ဒေါ်ခင်ဖြိုးသန့် တို့အိမ်က
ငါးအိမ်လောက်ပဲခြားတယ်သမီးရယ်။ အဲဒါကို ဝေးလို့
မလာနိုင်ပါဘူးတဲ့။ အဲဒီလူက ပင်ပန်းမယ့်အလုပ်ဆိုရင်
လေတောင်မချွန်ဘူးသမီးရဲ့။ သူ့သားဆို ပိုဆိုးလိမ့်မယ်။ ဖေဖေ
သမီး - အဟင့်.. ဟင့် . . အဲဒါဆို ဦးလှိုင်မျိုး ရဲ့ သားဆိုရင်ကော။
ဖေဖေ - ဘာ! ဦးလှိုင်မျိုးရဲ့ သား.. ဟုတ်လား.. ဖေဖေသဘော မတူနိုင်
ဘူး သမီး။ အဲဒီ ဦးလှိုင်မျိုးဆိုတာ ဖေဖေတို့ကျောင်းတုန်းက
ဘောလုံးကန်တာတောင် အရပ်မမီလို့ ၀င်မပါခဲ့ရဘူးသမီးရဲ့။
သူ့သားကို သူ့လိုအရပ်မျိုးဖြစ်မှာစိုးလို့ ငယ်ငယ်က စူပါမင်းဝတ်စုံ
တွေ ခဏခဏ၀တ်ခိုင်းခဲ့ရတာ သမီးရဲ့။ အဲဒီ ဦးလှိုင်မျိုးတောင်
ကံကောင်းလို့ မိန်းမရတာ။ သူ့မိန်းမ ဒေါ်ဝေေ၀ဖြိုးက သူအရမ်း
ကြိုက်တဲ့ စာရေးဆရာ နီကိုရဲ နဲ့ အရပ်အမောင်း တူတယ်ဆိုပြီး
သမီး - အဟင့်.. ဟင့် . . အဲဒါဆို ဖေဖေ့သူငယ်ချင်း အန်တီ
ဒေါ်ကျော့ကျော့လှိုင် ရဲ့ သားဆိုရင်ကော။
ဖေဖေ - ဘာ! ဒေါ်ကျော့ကျော့လှိုင်ရဲ့ သား.. ဟုတ်လား။
အခု နာမည်ကြီးနေတဲ့ စာရေးဆရာမ ကျော့ကလျာ(မုံရွာ) ရဲ့
သားကို ပြောတာလား။ မဖြစ်နိုင်ဘူး သမီး။ အဲဒီ စာရေးဆရာမ
ကျော့ကလျာ(မုံရွာ)ဆိုတာ အခုလို ဘတ်စ်ဆဲလားစာရေး
ဆရာမဖြစ်ဖို့ ဘ၀တွေ အများကြီးဖြတ်သန်းခဲ့တာ။ သူ့ရဲ့
အင်မတန် တန်ဖိုးထားတဲ့ သားကိုတော့ ဖေဖေတို့လို ဆွေကြီး
မျိုးကြီး လူကုံထံ သူဌေးသမီးနဲ့သဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးသမီး။
သမီး စိတ်ကူးယဉ်ပြီး မမျှော်လင့်ပါနဲ့၊ ဒါပဲ။
သမီး - အဟင့်.. ဟင့် . . အဲဒါဆို ဖေဖေ့သူငယ်ချင်း ဦးသက်ခိုင် တို့
ဆင်ဖြူကျွန်းမှာပဲ သမီးသွားနေတော့မယ် . . အဟင့် . . ဟင့် . .။
ဖေဖေ - ဘာ !!!!!!!!!!!!!!!
သမီး . . . ဒီနားကို လာစမ်း။ သမီးကို ဖေဖေ သေချာပြောပြမယ်။
အဲဒီ ဦးသက်ခိုင် ဆိုတာ . . . အရင်တုန်းက ဖေဖေထင်တာ
သမီးတွေ မွေးထားတယ်လို့။ အခုတော့ ဘယ်ဟုတ်မလဲ
ဖေဖေ့သူငယ်ချင်း ဦးမျိုးဆက်က သတိပေးမှ ဒီလူက မွေးထားတာ
သားကြီးပဲ နှစ်ယောက်တောင်။ သမီးကို ပို့လို့ မဖြစ်ဘူး။
ပြီးတော့ သမီးပြောတဲ့ ဆင်ဖြူကျွန်း ဆိုတာ ဟိုးအရင်တုန်းကတော့
ဦးအောင်သိန်းတို့ ဦးနန္ဒာစိုး တို့လို နာမည်ကြီးစာရေးဆရာတွေ
ရှိခဲ့တာမှန်ပါတယ်။ အခုတော့ အဲဒီမြို့ကလူတွေက ကဗျာတွေ၊
စာတွေအတွက် အချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူးနဲ့တူပါတယ်။ ဘီယာကို
တောင် အရသာခံ မသောက်တော့ဘူး။ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ဘီအီးနဲ့
ရောသောက်တယ် သမီးရယ်။ သမီးပြောတဲ့ ဖေဖေ့သူငယ်ချင်း
ဦးသက်ခိုင်ကလည်း အခု လွှတ်တော်အမတ်ကြီး ဖြစ်နေပြီဆိုတော့
သူ့သားတွေကို ဂရုစိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့သားတွေက
ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘီယာပုလင်းနဲ့ ဆော့ပြီး ကြီးလာတာ။
ဖေဖေ စိတ်မချနိုင်ဘူး သမီး။
သမီး - အဟင့်.. ဟင့် . . ဖေဖေကလည်း ဘာမှန်းလည်းမသိဘူး၊
နားကိုမလည်ဘူး။ ဟိုအရင်တစ်ခါ ဖေဖေ့သူငယ်ချင်းလူပျိုကြီးတွေ
ဦးဇော်နိုင်လင်း၊ ဦးရဲဝင်းသူ၊ ဦးမျိုးဆက်၊ ဦးငြိမ်းချမ်း တို့နဲ့
သမီးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လျှောက်လည်ကြဖို့ လာခေါ်တုန်းကလည်း
သမီးကို ဘာလို့ မလိုက်သွားခိုင်းတာလဲ။
ဖေဖေ - တယ်! . . ဒီကလေးမ ဖေဖေ့ကို ဘာတွေပြန်ပြောနေတာတုန်း။
ဖေဖေက မလိုက်သွားနဲ့ဆို မလိုက်သွားနဲ့ပေါ့။
အဲဒီလူပျိုကြီးတွေအကြောင်းကို ဖေဖေပဲ အသိဆုံး။
သမီး - အဟင့်.. ဟင့် . . အဲဒါဆို ဖေ့ဖေ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ သားတွေကို
ဖေဖေ - သြော် . .သမီးရယ် သမီးပြောတဲ့ ဖေဖေ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့
သားတွေကို လိုချင်လွန်းလို့ မရမက ပိုးပန်းနေတဲ့
ဖေဖေ့သူငယ်ချင်း သမီးရှင်တွေ ရှိပါတယ်။ ဟိုးအဝေးကြီးက
ဖေဖေ့သူငယ်ချင်း ဦးသိန်းသန်းသွင် ရှိတယ်။
(သူ့သမီးလေးက ကံကောင်းရှာပါတယ်၊ သူနဲ့မတူဘူး။)
နောက် ဖေဖေ့သူငယ်ချင်း ဦးမြတ်သူရဗိုလ် ရှိတယ်။
သူ့သမီးလေးနာမည်က ရဲရဲရင့်ရင့် တဲ့။
(သူ့ဖေဖေနဲ့တူရင်တော့ ရဲ မှာပါ။ သူ့ဖေဖေကလည်း
နောက် ဖေဖေ့သူငယ်ချင်း ဦးကျော်မင်းထွန်း ရဲ့ သမီးလေး
မမ သဲစုစုစံ ရှိတယ်။ အသားဖြူဖြူနဲ့ ချစ်စရာသမီးလေး၊
ဂျပန်မလေးနဲ့တူတယ်။ နောက် ဖေဖေ့သူငယ်ချင်း ဦးစိုးလွင်
ရှိတယ်။ သူ့သမီးလေး ခွန်းကြည်ဖြူ ဆိုရင် သူ့ဖေဖေရဲ့
၀က်လက်မြို့မှာ ကွမ်းတောင်ကိုင်(ကွင်း)တောင် ဖြစ်နေပြီ။
သမီး - ဟင့်... ဟင့် . . ဒါဆို သမီးက ဘယ်သူ့ကိုယူရမှာလဲ...လို့။
ဖေဖေ - သြော်သမီးလေးရယ် မငိုပါနဲ့ကွယ်. . . တိတ်. . .တိတ် . .တိတ်. .
သမီးရယ် ယောကျာ်းမရတာ ဘာဖြစ်လဲသမီးရဲ့။ သမီးမှာ
သမီးမေမေရဲ့ သူငယ်ချင်း အပျိုကြီးတွေ အများကြီးရှိတာပဲ။
ဟော မန္တလေးမှာဆိုရင် အန်တီမိုးမင်း၊ အန်တီအေးအေးခိုင်၊
စင်္ကာပူမှာဆိုလည်း အန်တီရိုစန်၊ အန်တီနှင်းနုနုအေး၊
အန်တီထားထားလှိုင်၊ အန်တီကေဇာနေ၀င်း၊ အန်တီခိုင်သဇင်ဦး၊
နောက် သမီးမေမေသူငယ်ချင်း အန်တီကေသွယ်ကျော်ရဲ့သမီး
နာမည်ကျော် ဒီဇိုင်နာ၊ မော်ဒန်မလေး“မမဆုအိသွယ်” လည်း
ရှိနေတာပဲ။ သူလည်း အပျိုကြီးဖြစ်မှာသမီးရဲ့။ သူ့မေမေ
အန်တီကေသွယ်ကျော်တောင် ကံကောင်းလို့။ နို့မို့ရင်
သူ့မေမေလည်း အန်တီရိုစန်တို့နဲ့ တစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်မှာ။
ရှိတယ်။ သူက ဖေဖေတို့ခေတ်က သျှီတို့၊ ကော်နီတို့လိုပဲ
တစ်ကိုယ်တည်း၊ အပျိုကြီး၊ Rockerကြီး။
တံတားဦးမှာဆိုရင်လည်း ဒီကနေ့ နာမည်ကြီး ကဗျာဆရာမ
ခင်ချိုလွင်(တံတားဦး) ခေါ် အန်တီခင်ချိုလွင်ရှိတယ်။
နောက် ဘယ်သူတွေရှိဦးမလဲ . . .။
( မအင်ကြင်းဦးနဲ့ ဆရာကျော်သူထွန်းတို့ရဲ့ သားလေး။
မြတ်နန္ဒာဥာဏ်ထွန်းရဲ့သားလေး၊ စိုးစိုးဟန်ရဲ့ သားလေး။
မချစ်တာ၊ တေးရွှေ၊ မဇာခြည်ဦး၊ မသူဇာလှိုင်တို့ရဲ့ ရင်သွေးလေးတွေ
ကျွန်တော် ရဟန်းဝတ်တုန်းကခင်ခဲ့တဲ့ ကိုရန်နိုင် နဲ့ မသီရိနိုင် တို့ရဲ့သားလေး၊
စိုးစန္ဒာစိမ့်ရဲ့ သမီးအကြီး ဖက်တီးပုပ်လေး။
ကျောင်းတုန်းက ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ဂီတာသံတွေကို အမြဲသီးခံအားပေးခဲ့တဲ့
ရွှေစည်တော်အဆောင်သူ ခင်သီတာနွယ်၊ အေးအေးတို့ရဲ့ ရင်သွေးလေးတွေ
အခြားအခြားသော ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများရဲ့ ရင်သွေးလေးတွေနဲ့
သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ရမှုလေးတွေ ရေးချင်ပါသေးတယ်။ )
ကျွန်တော်လည်း သမီးအိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေများနေ တာနဲ့ သမီးနဲ့ မိန်းမကို ဘာတွေပြောမိမှန်းမသိတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း သားရှင်တွေ၊ သမီးရှင်တွေ၊ လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီးတွေကိုလည်း အားနာမိပါတယ်။ ကျွန်တော်က သမီးလေးအတွက် စိတ်ပူမိတာကိုး။
စားပွဲပေါ်က စကော့တလန်မိတ် ဒိုင်းမွန်းလေဗယ်ဝီစကီကိုလည်း
အပြင်ဘက်ကို တစ်ယောက်တည်း လမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့မိတယ်။
လေညင်းလေးကလည်း ခပ်အေးအေးနဲ့ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း သမီးလေး အတွက် စိတ်ကူးတွေယဉ်ပြီး လမ်းလျှောက်လာခဲ့တာ တော်တော်ခပ်ဝေးဝေးကို ရောက်တော့မှ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိထားကြည့်မိတော့ ကျွန်တော်မသိတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုကို ရောက်နေတယ်ဗျ။
ကျွန်တော့်ဘေးဘက်မှာလည်း ဆောက်လက်စ အဆောက်အဦး အကြီးကြီးပဲ။
ကျွန်တော်လည်း ဟိုငေးဒီငေးကြည့်နေတုန်း အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ဆီကို တန်းတန်းမတ်မတ်ကြီးဗျာ လျှောက်လာတယ်။
ပြောရမလားပဲ။ သူက ပေါင်လည်ထက် အပေါ်နည်းနည်းပိုရောက်တဲ့
ကိုရီးယားစတိုင် ဂျင်းဘောင်းဘီအတိုလေးနဲ့ အပေါ်ပိုင်းက တီရှပ်နဲ့
“ဟဲ့ .. ကျော်စွာအောင် နင်ငါ့ကို မမှတ်မိဘူးလား” တဲ့။
ကျွန်တော်လည်း တော်တော်အားနာသွားပြီး၊ တစ်ခေါက်သေချာပြန်ကြည့်မိတယ်။ ကျွန်တော်မသိဘူး။ ပုံစံကတော့ တကယ့် မော်ဒယ်စတိုင်ပဲ။
“ ဟဲ့ .. ကျော်စွာအောင် ငါ jewel Oo လေ ”
“ ကျွန် . . . တော် . . . အား . . . နာ . . . . . ”
“သြော်.. ငါလေ ရတနာဦး ပါ နင်နဲ့ တစ်ကျောင်းတည်း ကျောင်းတက်ခဲ့တာလေ ”
“ ဗျာ! ရတနာဦး . . . မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်သိတဲ့ ရတနာဦးက ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ကျောင်းတုန်းက ရတနာဦး က နည်းနည်းဝသလားလို့။”
“ဟုတ်ပါတယ် . . ငါ ရတနာဦး ပါ . . နင်တို့က တစ်ခုခုဆို ငါ့နာမည်ကို မေ့တတ်လွန်းလို့ ငါက စင်္ကာပူမှာ Gym တွေ တအားကစားလိုက်တာ” ဆိုပြီး
မျက်မှန်အမည်းကြီးကို ချွတ်၊ ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကို နည်းနည်းကားပြီး ခါးထောက်လိုက်တယ်။
အဲဒီတော့မှ ကျွန်တော့်လည်း ထပ်ပြီးသေချာကြည့်မိတယ်။ ဟုတ်တယ်ဗျို့ . .
ရတနာဦး အစစ်ပဲ။ ကျွန်တော်မှတ်မိပြီ။ မှတ်မိဆို သူက မျက်မှန်ကြီးချွတ်လိုက် တော့မှ သူ့ ငယ်ရုပ် မျက်လုံးသေးသေးလေးနဲ့ ပါးဖောင်းဖောင်းကြီးက ပေါ်လာတာကိုး . . .
“ ဟာ . . ရတနာဦး . . သူငယ်ချင်း . . ဟာ . . ငါ တကယ်အံသြသွားတယ် သူငယ်ချင်းရေ . . နင် အခု ဘာတွေလုပ်နေတာတုန်း . . ”
“ ငါ အခု ၀င်ဒါမီယာထဲမှာ JEWEL MODEL ဆိုပြီး မော်ဒယ်သင်တန်းဖွင့်ထား တယ်ဟ...နင့်သမီးလေးကို ငါ့သင်တန်းကိုလွှတ်လိုက် ငါ 50% discount လျော့ပေးမယ်”
“အေးပါ . . အေးပါ . . ဒါနဲ့ . . . နင့်သင်တန်းက ၀ တာကိုပဲ ပိန်အောင်လုပ်ပေးတာလား။ ပိန်တာကိုကော ၀အောင်လုပ်မပေးဘူးလား ”
“ရတာပေါ့ဟ . . အခု ငါ့သင်တန်းမှာ ငါတို့ကျောင်းတုန်းကသူငယ်ချင်းတွေရှိ တယ်လေ။ သူတို့က သင်တန်းပြီးသွားလို့ သင်တန်းမှာပဲ နည်းပြ ပြန်လုပ်နေကြတယ်”
ပိန်တာကို ၀အောင်လုပ်တဲ့သင်တန်းမှာ နည်းပြတွေက မအိအိမိုးမြင့်၊ မချစ်နီလာဝင်း၊ မမြတ်လေးခိုင်၊ မစိုးမမထက်၊ မဝေေ၀လင်းမြင့်၊ ပဲခူးသူ မဥမာမင်းမွန် ၊ စိုးစိုးဟန်၊ နွေးနွေးဟန် နောက် မနန္ဒာနွယ်ဟန် တို့ ရှိတယ်ဟ . . . အဲ..နည်းပြချုပ်ကတော့ မကလျာမျိုးစံ။ စက်ကင်းန်နည်းပြချုပ်က မမီမီလှိုင် ပေါ့။
၀တာကို ပိန်အောင်လုပ်တဲ့သင်တန်းမှာတော့ နည်းပြတွေက အများကြီးဟ . .
အဲ . . နည်းပြချုပ်ကတော့ မစုသော်တာဝင်း ပေါ့။ စက်ကင်းန်နည်းပြချုပ်က မမျိုးမင်းမင်းမြတ်။
“ ကောင်းလိုက်တာ . . သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးစုမိနေကြတာပေါ့နော် . . ”
“သြော် . . . နောက်ထပ် အထူးသင်တန်းတစ်ခုရှိသေးတယ်ဟဲ့ . .”
“ဟုတ်လား . . . ဘာသင်တန်းတုန်းဟ”
“အဲဒီအထူးသင်တန်းက . . အရပ်ပုတဲ့သူတွေကို အရပ်ရှည်အောင်လုပ်ပေးတဲ့သင်တန်း”
“ဟုတ်လား . . . အသစ်ပဲ . . . သိပ်မကြားဖူးဘူးနော်”
ဟဲ့ . . နင့်မိန်းမ မခင်သန္တာထွန်း တောင် အဲဒီသင်တန်းကို လာတက်နေ တယ်လေ။ သူ့ကိုလည်း ပြောလိုက်ဦး . . သင်တန်းကို သိပ်မပျက်နဲ့လို့။
သင်တန်းက ရက်ပျက်များရင်တော့ ဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူးလို့”
“အင် . . ဟုတ်လား . . အော် . . အေး . . . အေး . . ငါပြောလိုက်ပါ့မယ်”
“ဒီသင်တန်းမှာတော့ ငါတို့ UCSM 1st Batch က မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတွေ
“အော် . . . အေးပေါ့ . . အေးပေါ့ . . အားလုံးနီးပါး ပုကြတာကိုး . . . နော့။
“ဒါပေမယ့် သင်တန်းပျက်ရက်များကြတယ်ဟ။ သင်တန်းမှာ ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့
ပုံမှန်တက်တဲ့သူတွေက မ၀ိုင်း၊ အေးအေး၊ မခင်ဖုန်း၊ မမိုးမင်း၊ မအေးအေးခိုင်၊
မစိုးယုမော်တို့ပဲ ရှိတယ်။ ထူးထူးခြားခြားယောက်ျားလေးထဲက ကိုငြိမ်းချမ်းလည်း သင်တန်းလာတက်သေးတယ်။”
မမေဖြိုးဖြိုးဇော်၊ မမီမီမျိုးမင်း၊ မခိုင်သဇင်ဦး၊ မဇာဇာလင်း၊ မကေခိုင်ဝင်း”
“ ၀မ်းသာတယ်ဟေ့ . . နင်က တကယ်ကို အလုပ်ဖြစ်နေတာပဲ. . .၀မ်းသာတယ် .
ဒါနဲ့ နင်က အခုဘယ်ကိုလာတာတုန်း . . ”
ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတုန်း ဆောက်လက်စအဆောက်အဦးထဲက အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဂျင်းဘောင်းဘီ သရီးကွာတားနဲ့ထွက်လာတယ်။
သူက ဆရာဝန်တွေသုံးတဲ့ မျက်နှာဖုံး(Mask Cover) တပ်ထားတော့
ကျွန်တော်လည်း ဘယ်သူမှန်းမသိဘူး။ မျက်နှာဖုံးမှာတော့ မီးခိုးရောင်လိုလို
အမှုန့်လေးတွေ ကပ်နေတာပဲ သတိထားမိတယ်။
သူက ကျွန်တော်တို့ အနားရောက်တော့မှ မျက်နှာဖုံးကိုချွတ်လိုက်ပြီး
“ဟယ် . . ကျော် . . စွာ . . အောင်” ဆိုပြီး နာမည် တစ်လုံးချင်း ၀မ်းသာအားရ ခေါ်တယ်။
အဲဒီတော့မှ ကျွန်တော်လည်း သေချာကြည့်လိုက်မိပြီး . .
“ ဟာ . . သူငယ်ချင်း . . ၀င်းသန္တာ . . ဟာ . . ၀မ်းသာလိုက်တာ
ငါတို့ မတွေ့ကြတာ ကြာပြီနော် . . ”
“ အေး . . ငါလည်း . . ၀မ်းသာပါတယ် ” ဆိုပြီး သူ့ခေါင်းပေါ်မှာ
ကပ်နေတဲ့ မီးခိုးရောင် အမှုန်လေးတွေကို ခါထုတ်နေတယ်။
ကျွန်တော်က. . ဘာတွေပါလိမ့်လို့ . . စဉ်းစားနေတုန်း . . .
“ ၀င်းသန္တာက အခု ကိုယ်ပိုင်ဘိလပ်မြေစက်ရုံ ထောင်ထားတာလေ ”လို့
ရတနာဦး က ဘေးက၀င်ပြောမှ ကျွန်တော် သဘောပေါက်သွားတယ်။
“သြော် . . ၀မ်းသာတယ်ဟေ့ ဒါဆို . . အခု ဒီကို ဘိလပ်မြေ လာပို့တာပေါ့ . .”
“ အေး . . ဟုတ်တယ် . . ဒါကြီးက ကိုဝင်းမင်းထွန်းနဲ့ မ၀ါဝါမြင့်ထွန်းတို့ ဆောက်တာလေ။ WIN & WAR CENTRAL TWIN TOWER (WWCTT) ဆိုပြီ ဖွင့်မလို့။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အစုံပါမှာတဲ့။
ငါတို့ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေလည်း ဒီမှာ အခန်းတွေ ကြိုဝယ်ထားကြတယ်။
မတမာချိုဦးက ဒီမှာ ပိုးထည်ဆိုင် အကြီးကြီး ထပ်ဖွင့်မယ်။
နောက် ဇင်ဇင်ထွန်း က “မိုးလုံးပြည့်နတ်မိမယ်” ဆိုပြီး ဆိုင်ခွဲထပ်ဖွင့်မယ်။
နေမျိုးထွန်းနဲ့ အိအိဝင်းက ဒီတစ်ခါတော့ “ PRESENT LINK ” ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့
လက်ရှိမျက်မှောက်ရေးရာတွေကိုပဲ သင်မယ့် သင်တန်းဖွင့်မယ်။
တခြားသူငယ်ချင်းတွေလည်း . . . . . . . . .
၀င်းသန္တာစကားမဆုံးခင်မှာပဲ ငလျင်လှုပ်သလို တုန်ခါမှုမျိုးနဲ့ အသံကြားလို့
မီးပုံးပျံကို လက်တွေ၊ ခြေထောက်တွေ၊ ခေါင်းတွေ တပ်ပေးထားသလိုမျိုး
ကျွန်တော်တို့ဘက်ကို တအိအိနဲ့ ရွေ့လာတယ်။
၀င်းသန္တာတို့ကတော့ သိပ်မထူးဆန်းသလိုပဲ လှမ်းပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။
“ ဟေ့ . . . နန်းတွမ်ဟွမ်စော ဘယ်သွားမလို့တုန်း . . .”
ကျွန်တော်လည်း အဲဒီတော့မှ ပြူးပြူးပျာပျာနဲ့ သေချာကြည့်မိတယ်။ ဟုတ်တာ ပေါ့ . .။ ဒီ နှာခေါင်းသေးသေးသွယ်သွယ်လေးပေါ်မှာ မျက်မှန် အ၀ိုင်းကြီး တပ်ထားတဲ့ စတိုင်က ကျောင်းတုန်းက မော်ဒယ်ဂဲ နန်းတွမ်ဟွမ်စော ပဲပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုဖြစ်လို့ မော်ဒယ်ဂဲ ကနေ ဒီလိုပုံစံကြီးဖြစ်သွားတာပါလိမ့်။
“ဟေ့ကောင် . . . ဘာစိုက်ကြည့်တာလဲ . . .
ဒီမျက်လုံးနဲ့ . . . ဒီနှာခေါင်းနဲ့ . . . နင် . . ကျော်စွာအောင် မို့လား”
“ ဟဲဟဲ . . သူငယ်ချင်း တွမ် . . နေကောင်းလား . . .
နင် ဒီလိုပုံစံကြီး ဖြစ်သွားတယ်နော် . . ဟဲဟဲ . .အခု ဘယ်သွားမလို့လဲ ”
“ ငါ အခု မတ္တရာကိုသွားမလို့ . . . ဟိုမှာ မြတ်မျိုးနွယ်ဝေ နဲ့ လင်းလင်းဝင်း က
ဘောလုံးအသင်းထောင်မလို့ လူလိုနေတယ် ပြောလို့ . .”
“ ဟင် . . နင်က . . ဒီပုံကြီးနဲ့ . . ”
“ဟဲ့ . . ငါကတော့ ဘယ်ဝင်ပါပါ့မလဲ . .
အခု မြတ်မျိုးနွယ်ဝေ က ကလေး(၄)ယောက်
လင်းလင်းဝင်းက ကလေး(၃)ယောက် . .
အဲဒါကို ကောင်မတွေက ဘောလုံးတစ်သင်းစာပြည့်သွားအောင်
ကလေးထပ်ယူကြရင် ကောင်းမလား တိုင်ပင်နေတယ်ကြားလို့ . . .
နင်တို့ဆီ ပို့လိုက်မယ်လို့ သွားပြောမလို့ . . .
ငါက အခု ကလေးနောက်တစ်ယောက်နဲ့ဆိုတော့
ကျန်တဲ့ကလေးတွေကို မထိန်းအားတာနဲ့ အတော်ပဲ ” ဆိုပြီး
ကျွန်တော်လည်း အဲဒီတော့မှ သေချာကြည့်မိတယ်။
မီးပုံပျံကြီးက အထဲမှာ ကလေးရှိနေတာကိုး။
ကျွန်တော်လည်း ရတနာဦးနဲ့ ၀င်းသန္တာတို့ကို သေချာနှုတ်ဆက်ပြီး
လမ်းချိုးလေးတစ်ခုကို ရုတ်တရက် ကွေ့လိုက်တော့ ဟိုဘက်က အရှိန်နဲ့နင်းလာ တဲ့ ပြိုင်စက်ဘီးနဲ့လူက ကျွန်တော့်ကို ၀င်တိုက်တော့မလိုဖြစ်ပြီး စက်ဘီးလက်ကိုင် ယမ်းကာ ယမ်းကာနဲ့ လမ်းဘေးထိုးဆင်းတော့မလို ဖြစ်သွားလို့ ကျွန်တော် မနည်းဖမ်းဆွဲလိုက်ရတယ်။
အဲဒီလူက တစ်ခေါင်းလုံးလည်း ဆံပင်တွေဖြူဖွေးလို့ စက်ဘီး ဒေါက်ထောက်ပြီး တော့ ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ကို အရင်မီးညှိလိုက်သေးတယ်။ ပြီးမှ
“ ဆောရီးပဲ အစ်ကိုရာ . . ကျွန်တော်က စက်ဘီးမစီးတာ
ကြာနေပြီး အခုမှ စမ်းစီးကြည့်မိလို့ပါ . . ဟဲ ဟဲ ”
“ဟာ . . သူငယ်ချင်း . . ငမင်း . . ကိုနှောင်း . . ကျော်မင်းထွန်း”
ပလုံးပထွေးနဲ့ သူ့နာမည်တွေ အကုန်ခေါ်ပြီး ၀မ်းသာအားရ ပြေးဖက်မိတယ်။
“ဟာ . . သူငယ်ချင်း . . ဂေါဠု . . ကျော်စွာအောင်” ဆိုပြီး
ကျော်မင်းထွန်းက တဟီးဟီးနဲ့ အသံထွက်ပြီး ငိုလိုက်သေးတယ်။
“မင်းကွာ . . ဘာလို့ ဒီအရွယ်ကြီးကျမှ စက်ဘီးစီးနေတာလဲ” ဆိုတော့
“အာ. . . ငါက အိမ်မှာ ကား(၆)စီးတောင် ရှိတယ်ကွ . .
ငါ့အတွက်(၁)စီး၊ ယောက်ခမ(၁)စီး၊ ယောက်ဖ(၁)စီး၊
ငါ့မိန်းမ(၁)စီးနဲ့ ငါ့ကလေးနှစ်ယောက်အတွက် တစ်ယောက်(၁)စီး စီ . .
ဒါပေမယ့် ကားမောင်းရတာ . . ကြာတော့ ငြီးငွေ့လာတယ်. .
ငယ်ငယ်ကလို ပြိုင်ဘီးလေးပဲ စီးချင်လာလို့ စမ်းနင်းကြည့်တာ . . ”
“အေးကွာ . . အဲဒါဆို ငယ်ငယ်ကလို ငါတို့ ဒီပြိုင်ဘီးလေးကို
နှစ်ယောက်စီးရအောင် . . ဘယ်သွားရင်ကောင်းမလဲ ”
“ Elephant Room ကိုသွားမယ်ကွာ . . ”
“ ဘာလဲကွ Elephant Room ဆိုတာ. . ”
“ ဟာ . . မင်းမသိဘူးလား . . လူပျိုကြီး ကိုဇော်နိုင်လင်း ရဲ့ အခန်းလေကွာ ”
“ငါမသိဘူးကွ . . ပြောပြပါဦး . . ”
“ ကိုဇော်နိုင်လင်း က ဈေးချိုနားမှာ
ဦးသန်းညွန့်+ဒေါ်တင်ကြည် TNK GOLDSMITH PLAZA ဆိုပြီး
အဆောက်အဦး အသစ်ဆောက်ထားတယ်ကွ။ အဲဒီအပေါ်ဆုံးထပ်မှာ ငါတို့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အခန်းတစ်ခန်း သီးသန့်ဖယ်ထားတယ်။ အခန်းလေးက တော်တော်ကျယ်တယ်။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့ တော်တော်လေးလည်း အေးချမ်းတယ်ကွ။ ငါတို့သူငယ်ချင်းတွေ တရားထိုင်လို့လည်း ရတယ်။
တရားခွေလေးဖွင့်ပြီးတော့ အေးအေးဆေးဆေး တရားနာလို့လည်းရတယ်။”
“ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှတော့ အဲဒီလိုတွေ မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးကွာ။
လူစုံရင် ဘီယာသောက်တယ်။ ဖဲရိုက်တယ်။
ကာရာအိုကေသီချင်းတွေ ဆိုကြတာ များပါတယ်။”
“ ဟေ! . . ဟုတ်လား . . ကောင်းလိုက်တာကွာ . . .
ဒါဆို ငါတို့ အခုပဲ အဲဒီ ELEPHANT ROOM ကိုသွားကြစို့ . . ”
ကျွန်တော်က ပြိုင်ဘီးရဲ့ရှေ့ဘားတန်းကို ဘေးစောင်းခုန်တက်ပြီး စက်ဘီး လက်ကိုင်ကို ကိုင်လိုက်တယ်။ ကျော်မင်းထွန်းက ကျွန်တော့်ပခုံးကိုကိုင်ပြီး စက်ဘီးကို နင်းတာပေါ့။ ဒါက ငယ်ငယ်တုန်းက ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စတိုင်။
အခုတော့ အဲဒီလို ဘယ်ဟုတ်မှာတုန်း။ ကျွန်တော်က ၀မ်းသာအားရနဲ့
စက်ဘီးရှေ့ဘားတန်းကို ခုန်တက်လိုက်တာ လက်ကိုင်နဲ့ စက်ဘီးထိုင်ခုံကြားမှာ
ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်က တစ်နေပြီး ဘားတန်းလည်းကျိုး စက်ဘီးလည်း လဲပါလေရော . . .
ဒါနဲ့ မထူးပါဘူးကွာ . . ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် . .
ဈေးချိုကို လမ်းလျှောက်လာခဲ့ကြတယ် . . ။
“ ငါတို့ ကျူံးဘေးကနေ လမ်းလျှောက်ကြမယ်ကွာ ” ဆိုတော့
ကျွန်တော်ကလည်း “ အေး. . ကောင်းတယ် သူငယ်ချင်း” ဆိုပြီး
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် စကားတပြောပြောနဲ့ လမ်းလျှောက်လာခဲ့လိုက်တာ
မဇင်ဇင်ထွန်း တို့သားအမိနှစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်ဗျာ . .
အမယ်. . သူတို့သားအမိနှစ်ယောက်က ကျောပိုးအိတ်ကိုယ်စီနဲ့
နှစ်ယောက်စလုံး ခေါင်းကိုမော့ပြီး လမ်းလျှောက်လာနေကြတယ်။
“ ဟာ . . မဇင်ဇင်ထွန်း တို့ပါလား . . မန္တလေးတောင် တက်ကြမလို့လားဗျ . .”
“ ဟယ် . . ကျော်စွာအောင် နဲ့ ကျော်မင်းထွန်း . . နေကောင်းကြတယ်နော် . .
မတွေ့တာတောင် တော်တော်ကြာပြီ။ သြော် . . . မန္တလေးတောင်တက်မလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက ငါ့သမီး လေ . . .
သမီး ကျောင်းတက်မှာဖို့ လေ့ကျင့်ပေးနေတာ”
ကျွန်တော်တို့လည်း နည်းနည်းတော့ နဝေတိမ်တောင်ဖြစ်သွားတယ်။ ကျောင်းတက်ဖို့ လေ့ကျင့်တာကလည်း ကျောပိုးအိတ်ကြီးလွယ်လို့။ သူ့သမီးကို ကြည့်လိုက်တော့ ရင်ဘတ်ကို နည်းနည်းကော့ထားတာ တွေ့ရတယ်။
“ငါတို့ကျောင်းတက်တုန်းက . . . လက်ဆွဲခြင်းထဲမှာ ထမင်းဗူး၊ ရေဗူး၊ မိတ်ကပ်ဗူး၊ ပေါင်ဒါဗူးတွေ အကုန်ထည့်ပြီး နေ့တိုင်းသယ်ရတယ်လေဟာ . . .
အဲဒါ ကျောင်းပြီးသွားတော့ ငါ့မှာ ခါးကုန်းပြီးတော့ ခေါင်းငုံ့လမ်းလျှောက်တဲ့ အကျင့်က တော်တော်နဲ့ မပျောက်ဘူးဟ။
ငါ့သမီးအလှည့်ကျ သူ့ကိုခါးကုန်းပြီးတော့ ခေါင်းငုံ့လမ်းလျှောက်တာမျိုး မဖြစ်အောင် ကျောပိုးအိတ်လွယ်ပြီး လေ့ကျင့်ပေးနေတာ . . . ”
“ကဲ . . ငါတို့ ဆက်လေ့ကျင့်လိုက်ဦးမယ်နော် လာ . .သမီး . .သွားစို့ ” ဆိုပြီး
သားအမိနှစ်ယောက် ကျောပိုးအိတ်ကိုနည်းနည်းပြင်လွယ်၊ ခါးကိုမတ်၊ ရင်ဘတ်ကိုကော့ပြီးတော့ ခေါင်းမော့လို့ ဆက်လျှောက်သွားကြပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ကျော်မင်းထွန်းကို “ သူငယ်ချင်း . . သူ့နည်းလေး မဆိုးဘူးပဲကွ မင့်သမီးနဲ့ ငါ့သမီးကိုလည်း ဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်ပေးရင်ကောင်းမယ်”ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်။
ယာဉ်ထိန်းရဲရုံးခန်းမှာ လူတွေဝိုင်းအုံနေတာကို တွေ့ရတယ်။
“ဘာဖြစ်တာတုန်းဗျ” လို့ လှမ်းစပ်စုလိုက်တော့
“လူတစ်ယောက် ဓါးနှစ်လက်ကိုင်ပြီး လျှောက်ပြေးနေလို့
ယာဉ်ထိန်းရဲက ခဏဖမ်းချုပ်ထားတယ် ပြောတာပဲ”
ကျွန်တော်က ကျော်မင်းထွန်းကို “သူငယ်ချင်းရေ . . . ငါတို့အသိထဲက ဖြစ်နေဦးမယ်ကွ ခဏကြည့်ရအောင်”ဆိုပြီး ယာဉ်ထိန်းရဲရုံးခန်းထဲကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့
ဟာ . . ဓါးနှစ်လက်နဲ့ အနားမကပ်နဲ့ဆိုတဲ့ သိန်းသန်းသွင် ပါလား။
ယာဉ်ထိန်းရဲကိုလည်း ဘုဂလန့်တွေ ပြန်ပြောနေတာ တွေ့ရတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့လည်း ယာဉ်ထိန်းရဲရုံးကို ၀င်ပြီး အကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့
ယာဉ်ထိန်းရဲက ဓါးနှစ်လက်ကိုတော့ သိမ်းယူထားပြီး
“ဟေ့ကောင်တွေ . . ကျော်စွာအောင်နဲ့ ကျော်မင်းထွန်း . . .
မင်းတို့ ငြိမ်းချမ်းကိုတွေ့မိလား။ ငါ ငြိမ်းချမ်းကို လိုက်ရှာနေတာကွ”
“အာ . . . သိန်းသန်းသွင် . . မင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းနဲ့ ကျောင်းတော်ကရန်စ
“ဟာ . . . မင်းတို့ထင်သလို မဟုတ်ပါဘူး။ ငါနဲ့ ငြိမ်းချမ်းနဲ့ ကိုဆင်ကြီးရဲ့ Elephant Room မှာ တွေ့ကြတာ။ အဲဒါ ငြိမ်းချမ်းက ဓါးနှစ်လက် လိုချင်တယ်ပြောလို့။ ငါလည်း ကိုဆင်ကြီးရဲ့ မီးဖိုခန်းထဲက ဓါးနှစ်လက် ဆွဲယူလာတာကို အဲဒီ ငြိမ်းချမ်းဆိုတဲ့ကောင်က အတင်းထွက်ပြေးသွားတယ်ကွ။”
“အဲဒါ ငြိမ်းချမ်းက ရှေ့ကပြေး၊ ငါက နောက်ကလိုက်နဲ့
ဒီနားတင်ပျောက်သွားတယ်ကွာ . .”
ကျော်မင်းထွန်းက “အာ . . . ဓါးနှစ်လက်ဆိုတာ ပုဆိုးနံမည်ကို ပြောတာ နေမှာပါ။ ငြိမ်းချမ်းက သူ့အဖေအတွက် ဓါးနှစ်လက်ပုဆိုးဝယ်ချင်တယ်လို့
ငါ့ကို ပြောဖူးတယ်” ဆိုတော့
သိန်းသန်းသွင် က “အဲဒီလိုလား . . ဟား . . ဟား . . ဟား . . .
ဒါဆိုရင်တော့ အဖြစ်မှန်ကို ရှင်းပြဖို့ ငြိမ်းချမ်းကို ငါလိုက်ရှာလိုက်ဦးမယ်” ဆိုပြီး
သူ့ပုံစံအတိုင်း လမ်းဆက်လျှောက်ပြီး ထွက်သွားပါတယ်။
သိန်းသန်းသွင် လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံက ထူးခြားပါတယ်။
သိန်းသန်းသွင်က လမ်းလျှောက်ရင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခါးအပေါ်ပိုင်းနဲ့ ခါးအောက်ပိုင်းကို သီးသန့်စီခွဲပြီး လျှောက်ပါတယ်။ ခါးအပေါ်ပိုင်းက ညာဘက်ကိုယိမ်းရင် ခါးအောက်ပိုင်းက ဘယ်ဘက်ကို ယိမ်းပါတယ်။
ခါးအပေါ်ပိုင်းက ဘယ်ဘက်ကို ယိမ်းရင် ခါးအောက်ပိုင်းက ညာဘက်ကိုယိမ်းပါတယ်။
ကျွန်တော်နဲ့ ကျော်မင်းထွန်းလည်း သိန်းသန်းသွင် လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံအတိုင်း
ကြိုးစားပြီး လျှောက်ကြည့်ကြသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြိုးစားလို့ မရပါဘူး။
သိန်းသန်းသွင် လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံက အတတ်ပညာပါတယ်လို့ ပြောရမယ်။
အဲဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော့်ပုံစံအတိုင်း
လက်နှစ်ဖက်ကို နည်းနည်းကား၊ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို နည်းနည်းကားပြီး ကားရားကားရားနဲ့ ဆက်လျှောက်ပါတယ်။
အဝေးကကြည့်ရင်တော့ သဘောင်္တစ်စီး ခုတ်မောင်းလာသလိုလို
ဒါမှမဟုတ် မီးရထားတစ်စီး ခုတ်မောင်းလာသလိုလို ဖြစ်နေမှာပေါ့။
ကျွန်တော်နဲ့ ကျော်မင်းထွန်းနဲ့ ၂၆ဘီလမ်းအတိုင်း လမ်းဆက်လျှောက်ခဲ့ကြပါ တယ်။ ဈေးချိုနာရီစင်ကြီးကို ကျော်လိုက်တော့ ညာဘက်မှာ TNK GOLDSMITH PLAZA ဆိုတဲ့ အဆောက်အအုံကြီးကို ရောက်လာပါတယ်။ အဲဒီကနေတဆင့် အပေါ်ဆုံးထပ်မှာရှိတဲ့ ကိုဇော်နိုင်လင်းရဲ့ ELEPHANT ROOM ကို တက်ခဲ့ပါ တယ်။ ကိုဇော်နိုင်လင်းရဲ့ ELEPHANT ROOM က ကျော်မင်းထွန်းပြောသလိုပဲ တော်တော်ကျယ်ပါတယ်။ အခန်းရဲ့ ထောင့်ချိုးနှစ်ဖက်မှာ ဘိလိယက်ခုံခန်း၊ ကွန်ပျူတာခန်း၊ ကာရာအိုကေခန်းနဲ့ အခြားအခန်းလွတ်လေးတွေ ကန့်ထားပြီး
ဘေးပတ်ပတ်လည်ကို မှန်အမည်းတွေ အပြည့်ကာထားတော့ လေလည်း တော်တော်လုံပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတော့ ကိုဇော်နိုင်လင်းက ရေချိုးနေတယ်။
ကျွန်တော်တို့လည်း ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ကျန်နေတဲ့
ဘီယာဗူးနှစ်ဗူးကို ဖောက်သောက်ရင်း ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်နေတာပေါ့ . .
အားပါးပါး . . . ကျွန်တော့်ဘေးဘက်က ဆိုဖာပေါ်မှာအိပ်နေတဲ့လူက
သူ့နှာခေါင်းကြီးနဲ့ လေတွေ အားရပါးရ ရှုနေတော့ ဘေးလူတွေ အသက်ရှုမ၀ ဖြစ်ကုန်တာပေါ့။
အဲဒီမှာ ကိုဇော်နိုင်လင်းက ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာပြီး
“ ဟေ့ကောင် . . အဂျေး . . မင်း . . အဲဒီလို အသက်မရှုနဲ့လေကွာ
မင်း . . အဲဒီလို အသက်ရှုတော့ ဘေးလူတွေအတွက် လေ ဘယ်ကျန်တော့မလဲ ”
အဂျေး လည်း ၀ရန်တာဘက်ကို ပျာယိပျာယာနဲ့ ကုတ်ကုတ်ကလေး ပြေးထွက်သွားတော့မှ ကျွန်တော်တို့လည်း ချောင်ချောင်လည်လည်လေး
အသက်ရှုရတော့တယ် . . ။
“ကဲ . . ဒါဆို . . ဂေါဠုရေ . . မင်း ဒီမှာ အေးအေးဆေးဆေးနေခဲ့ဦး ..
ငါ . . အိဟေမာဝိုင်းဇာခြည်စိုး တို့ဆိုင် ခဏသွားလိုက်ဦးမယ် . .”
“ ဘယ်သူတုန်းဟ အိဟေမာဝိုင်းဇာခြည်စိုး ဆိုတာ . .”
ကျော်မင်းထွန်းက သူ့ထုံးစံအတိုင်း ဆေးလိပ်ကို မီးညိ§ပြီး အရင်ဖွာတယ်။
နောက် တင်ပါးကို သုံးချက်ကုတ်၊ ခေါင်းကို နှစ်ချက်ကုတ်ပြီးမှ
“ ဟဲ . . ဟဲ . . ငါပြောတာ လောသွားလို့ပါကွ .. အိဟေမာဝိုင်းဇာခြည်စိုး ဆိုတာ မအိဟေမာကျော်၊ မ၀ိုင်း၊ မဇာခြည်သိန်းနဲ့ မစိုးဝင်းမာတို့က အခု ဈေးချိုမှာ အလှကုန်ဆိုင်ကြီးဖွင့်ထားတယ်ကွ။ အဲဒါ ကြုံတုန်းလေး သူတို့ဆိုင်ကစာရင်းတွေ ကို ငါတို့ Galaxy က Accounting Software သုံးပါလားလို့ Marketing ခဏ၀င်လိုက်ဦးမယ် . .” ဆိုပြီး ထွက်သွားပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ဆိုဖာပေါ် အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ချလိုက်ပြီး . . .
ဘီယာဗူးကို ဆိုဖာခုံဘေးက ကျွန်းစားပွဲခုံလေးပေါ် အသာတင်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီလို တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ ကျွန်းစားပွဲခုံက လှုပ်လာပြီး
နောက် အဲဒီ ကျွန်းစားပွဲခုံကပဲ ထလာပြီး
“ ဟာ . . ဘာတွေတုန်းဟ . . ဘာတွေတုန်းဟ . . ဟာ . . ဘီယာတွေပဲ . . . ဟာ. . ဒုက©ပါပဲ . . . သြော် . . . ငါက . . ဘယ်သူများလဲလို့ . . ငအောင်
မင်း . . ဘာလို့ . . ငါ့နဖူးပေါ်ကို . . ဘီယာဗူးကြီးလာတင်ရတာတုန်း . .”
လက်စသတ်တော့ ကိုသားကြီး (ခေါ်) ကိုကျော်စွာမျိုး ပါလား။ဒီကောင်က ဆိုဖာပေါ် ပက်လက်လန်အိပ်နေတော့ ဒီကောင့်နဖူးကို ကျွန်တော်က ကျွန်းရောင်ပြောင်နေတဲ့ စားပွဲခုံမှတ်လို့။
“ ဟား . .ဟား.. ဟား .. ငမျိုး. . . မင်းကလည်းကွာ နဖူးကြီးကို တော်တော် ပြောင်လာတာပဲ ဟဲ . . ဟဲ . . ဟဲ . . စိတ်မဆိုးပါနဲ့ . . ငမျိုးရာ . .”
“ စိတ်မဆိုးပါဘူးဟ ငအောင်ရ .. ငါက ဘီယာတွေ နှမျောလို့ပါ” ဆိုပြီး သူ့နဖူး ပေါ်က ဘီယာတွေကို (ကိုသားကြီးစတိုင်နဲ့) တရိုတသေလေး သပ်ချနေတယ်။
ကျွန်တော်က“အေးကွာ . . တကယ်ဆောရီးပါ . . ငမျိုး ရာ. . ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်း . . ဘီယာဗူးက တစ်ဗူးပဲ ကျန်တော့တယ်ကွ
အဲဒါ . . ငါပဲ အရင်သောက်လိုက်မယ်နော် ”
“မင်းနဲ့ ငါက ကျော်စွာ ချင်းတူပေမယ့် ငါက Aung
ဆိုတော့ A နဲ့စတယ်။ ငါအရင်ပေါ့ကွာ ”
“ ဒီလိုတော့ ဘယ်ရမလဲကွ။ ငါက မျိုး ဆိုတော့ မြန်မာလိုဆိုရင် မ အက©ရာက အရင်လာတာကွ။ မင်းက အောင် ဆိုတော့ ဘိတ်ဆုံးမှ။ငါပဲ အရင်သောက်မယ်. . ပေး” ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ဆီက ဘီယာဗူးကို လုယူသွားပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း“အေးပါ . . အေးပါ . . မင်းက မ နဲ့ အကျိုးပေးတဲ့ကောင်ဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ငြင်းခုန်နေကြတုန်း အဂျေး က ၀ရန်တာကနေ အိနြေ္ဒလေးနဲ့ပြန်ဝင်လာတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အဂျေးရဲ့ ပါးတစ်ဖက်ယောင်နေတာကို အဲဒီတော့မှ သတိထားမိသွားတယ်။
ကျွန်တော်က “ ဟာ . . သူငယ်ချင်း . . အဂျေး . . မင်း . . ပါးတစ်ဖက်က ဘာဖြစ်တာတုန်း . . ” ဆိုတော့
“ မပြောချင်တော့ပါဘူးကွာ . . ငါသွားကိုက်နေတယ် လို့ . . အောင်ဝင်းထွဋ် ရှေ့မှာသွားပြောလိုက်မိလို့ပါကွာ . . ”
“ အဲဒီ အောင်ဝင်းထွဋ် ဆိုတဲ့ကောင်က . .အခု အိမ်ဆောက်ပစည်းရောင်းတဲ့ဆိုင် ဖွင့်ထားပေမယ့်သူ့ရဲ့ Dentist ပညာလေးကိုလည်း အမြဲထုတ်ပြချင်နေတာကွ ”
“ အဲဒါကို သူ့ရှေ့မှာ ငါက သွားကိုက်နေတယ်လို့ ပြောလိုက်မိတာကို . . ပြစမ်း.. ပြစမ်း ဆိုပြီး သူ့ဆိုင်မှာတင်ရောင်းတဲ့ သံကျင်တွယ်နဲ့ ငါ့သွားကို အတင်းကလန့် လိုက်တယ်ကွာ . . နာလိုက်တာ . . . ”
“ ဟား . . . ဟား . . . ဟား . . . မင်းက ထွဋ်ကြီးကို ပညာသွားစမ်းသလို ဖြစ်သွားတာကိုးကွ . . ဟား . . . ဟား . . . ဟား . . . ဟား . . .”
ကျွန်တော်လည်း Elephant Room မှာ နောက်ထက်ဘာတွေများရှိဦးမလဲလို့
ကိုကျော်ဇေယျ နဲ့ ကိုမျိုးနန္ဒ တို့နှစ်ယောက်
အေးအေးဆေးဆေး ကျားထိုးနေတာကို တွေ့ရတယ်။
ကျားထိုးတယ်ဆိုပေမယ့် ရိုးရိုးတော့မဟုတ်ဘူး ကိုကျော်ဇေယျ က ပင်နီတိုက်ပုံ၊ ကချင်ပုဆိုးနဲ့ လွယ်အိတ်နီကြီးလွယ်လို့။ ကိုမျိုးနန္ဒ က ဇာတ်မင်းသားဝတ်စုံကြီး ၀တ်လို့။
“ခင်ဗျားတို့ . . ဘာလုပ်နေကြတာတုန်းဗျ ” ဆိုတော့
ကိုမျိုးနန္ဒ က “ ကျားထိုးနေကြတာလေ . . ဒါပေမယ့် ကိုကျော်ဇေယျက နိုင်ငံရေးနည်းပညာနဲ့ . . . ကျွန်တော်က ဇာတ်မင်းသားနည်းပညာနဲ့ . . . ”
ဒါနဲ့ ဘေးကနေ အကဲခတ်ကြည့်လိုက်တော့
ကိုကျော်ဇေယျက စာအုပ်အထူကြီးကို တစ်ရွက်ချင်းလှန်ကြည့်ပြီးမှ ကျားကွက်ကို
ကိုမျိုးနန္ဒက ကျားကွက်တစ်ကွက်ရွေ့ပြီးတိုင်း ဇာတ်မင်းသားကကြိုးတစ်ကွက်ကို ထ က တယ်။
ကျွန်တော်က ဘေးမှာ ဆိုင်းဝိုင်းတွေဘာတွေများ ရှိသေးလားလို့ ရှာကြည့်ပါသေး တယ်။ ဒါပေမယ့် မရှိပါဘူး။ သူတို့ အဆင်ပြေနေကြတာပဲလေ . . ဆိုပြီး
ဇာတ်လမ်းက ဘယ်ကနေဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်မသိဘူး။ ကိုဇော်နိုင်လင်းရဲ့ အဆောက်အဦးကြီးက ယိမ်းထိုးလာတယ်။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း ယိမ်းထိုးလာပြီး တစ်ဒုန်းဒုန်းနဲ့ အသံတွေကြားရတယ်။
ELEPHANT ROOM ရဲ့ တံခါးကို ခေါက်နေကြတဲ့အသံတွေလည်း ကြားနေရတယ်။
တံခါးပေါက်ကင်မရာကတစ်ဆင့် ကြည့်လိုက်တော့ အပေါ်ကအဖြူ၊ အောက်ကစိမ်းပြာရောင်နဲ့ ကွန်ပျူတာကျောင်းဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့ဆရာမတွေ အများကြီးပဲဗျာ. . .
သေချာကြည့်တော့ ဟာ . . ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေ အိအိမိုးမြင့်၊ ချစ်နီလာဝင်း၊ မြတ်လေးခိုင်၊ ကလျာမျိုးစံ မီမီလှိုင်၊ စုသော်တာဝင်း၊ မျိုးမင်းမင်းမြတ်၊ စိုးမမထက်
နန်းတွမ်ဟွမ်စော၊ မြတ်မျိုးနွယ်ဝေ၊ လင်းလင်းဝင်း ဟာ . . အများကြီးပဲ . .
မကျေနပ်ဘူးတဲ့ . . . ကျော်စွာအောင် အခန်းထဲမှာရှိတာကိုသိတယ်တဲ့။
အခုထုတ်ပေးပါတဲ့ . . .
ငါတို့ကို ရတနာဦးရဲ့ Gym က နည်းပြတွေလို့ပြောတာ
မကျေနပ်ဘူးတဲ့ . . . ဟာ . . မြန်လှချည်လား . . .
ငါ့ကိုလည်း မီးပုံပျံကြီးလို့ ပြောတာမကျေနပ်ဘူးဟေ့ . . .
ငါတို့ကိုလည်း ဘောလုံးအသင်းထောင်မယ်ပြောတာ မကျေနပ်ဘူးဟေ့ . . .
အသံတွေက ဆူညံနေတယ် . . .
ငါတို့က ကျောင်းမှာ လူရိုသေ၊ ရှင်ရိုသေ ဆရာမတွေ ကထိကတွေ ဌာနမှူးတွေ ဖြစ်နေကြပြီ။ အခုလို နောက်ပြောင်ပြီးရေးတာကို မကျေနပ်ဘူး ဇော်နိုင်လင်း . . . အခုချက်ချင်း အဲဒီကောင်ကို ထုတ်ပေးပါတဲ့ ။
ငါတို့က ကျောင်းကနေ သိသိချင်း ရရာလက်နက် ဆွဲကိုင်ပြီးထွက်လာကြတာ . .
အခုချက်ချင်း တံခါးဖွင့် . . .တဲ့ . .
ဟုတ်တယ်ဗျ. . သူတို့က တကယ်ကိုရရာလက်နက်တွေ ဆွဲကိုင်လာခဲ့ကြတာ
အိအိမိုးမြင့် က ကီးဘုတ်ကြီးကိုင်လာတယ် ချစ်နီလာဝင်း က မောက့်စ်နှစ်လုံးကို ပူးချည်ပြီး နံချပ်ကူလို ကိုင်ထားတယ်။ မကလျာမျိုးစံက မော်နီတာကြီး ကိုင်လာတယ်။ နန်းတွမ်ဟွမ်စောကတော့ စစ်စတမ်ဘုံးကြီးနဲ့ ထုမယ် အဲဒီကောင်ကို အခုချက်ချင်းထုတ်ပေးတဲ့။
ကျွန်တော်လည်း တော်တော်ကိုပျာသွားတယ် လူကလည်း ယိုင်ထိုးနေတုန်းပဲ။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကိုဇော်နိုင်လင်းက“ ဟာ . . တံခါးဖွင့်ပေးလို့တော့မဖြစ်ဘူး . .
နောက်ဖေးပေါက်ရှိတယ်။ နောက်ဖေးပေါက်ကနေ ဆင်းမယ်။
ဒီကောင့်ကို ဆွဲခေါ်လာခဲ့ဟေ့ . . ” ဆိုပြီး
ကျွန်တော့်ကို တစ်ယောက်တစ်ဖက်ဆွဲချလာပြီးတော့ ကိုဇော်နိုင်လင်းရဲ့ ဟိုင်းလပ်ကားဝါကြီးနောက်ခန်းကိုပစ်တင်လိုက်ပြီး အတင်းမောင်းပြေးခဲ့ကြတယ်။
ကားပေါ်မှာလည်း ဇာတ်လမ်းနောက်တစ်ခုက ထပ်ပေါ်လာပါတယ်။
ကားကြမ်းခင်းပေါ်မှာ လဲနေတဲ့ကျွန်တော့်ကို အဂျေးက အပေါ်စီးကနေ ကြည့်ပြီး .
“ ဟေ့ကောင် . . ကျော်စွာအောင် မင်းနှာခေါင်းကများကွာ ငါ့နှာခေါင်းကို ကြီးတယ်ဟုတ်လား။ ကဲကွာ . . ကြီးဦး . . ကဲကွာ . . ကြီးဦး ” ဆိုပြီး
မျိုးနန္ဒနဲ့ ကျော်ဇေယျ တို့ကလည်း “ ကျွန်တော်တို့လည်း မကျေနပ်ဘူးဗျာ”ဆိုပြီး
ကျွန်တော်လည်း “အမလေးဗျာ . . . ကြောက်ပါပြီဗျ . . . တော်ပါတော့ဗျ”
ဆိုပြီး အော်နေရတုန်း . . . ကားရပ်သွားပြီးတော့ ရှေ့ခန်းက ကိုဇော်နိုင်လင်းက “ ဟာ . . ဟေ့ကောင်တွေ တော်ကြပါတော့ . . . မလုပ်ကြပါနဲ့ဟ . . လက်လွန်ကုန်ပါ့မယ် ” ဆိုပြီး ပြေးဆင်းလာပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကို ကန်တော်ကြီးဘက်ကို ခေါ်လာတာကိုး။
“ အမလေး . . ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ . . . ကိုဆင်ကြီးရာ ” ဆိုတော့
ကိုဇော်နိုင်လင်းက “ အမယ် . . . သိပ်ကျေးဇူးမတင်နဲ့ဦး ကိုယ့်ဆရာ။ ငါကလည်း မင်းကို သိပ်မကျေနပ်ဘူးကွ။ ငါရန်ကုန်လာတုန်းက မင်းက ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် (၁၀၈)ရက်အဓိဋ္ဌာန်လေးဘာလေးနဲ့ ငါနဲ့အတူ ဘီယာမသောက်ဘူး . . .
အဲဒါကြောင့် မင်းကို အခု ရေထဲပစ်ချမလို့ ခေါ်လာတာ . . ကြာပါတယ်ကွ . . ဒီကောင့်ကို ဆွဲချဟေ့”
“ ဟာ . . မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ . . မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာ . . ” ကျွန်တော်အော်နေတုန်း . .
ကျွန်တော့်ကို တစ်ယောက်တစ်ဖက်ဆွဲကိုင်ပြီး ရေထဲပစ်ချလိုက်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်က လေထဲမှာဝဲပြီး လက်ကလည်း ကားရားကားရားနဲ့
ပထမဆုံးအသိ- ကျွန်တော့်လက်က တစ်ခုခုကို တိုက်မိလိုက်ပါတယ်။
ဒုတိယအသိ - ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ရေနဲ့ထိပြီး အေးကနဲဖြစ်သွားပါတယ်။
တတိယအသိ - ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့ စိုးရိမ်တကြီးအော်ပြီး ပြေးလာတဲ့အသံကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။
“ ကို . . . ကို . . . ကိုရေ . . . ဘာတွေအော်နေတာတုန်း။ ဟော့တော် . . . ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ အိပ်ပျော်နေရတာလဲ။ ရေခဲခွက်တွေလည်း မှောက်ကျထားတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးလဲ ရေတွေစိုရွဲလို့ အအေးမိတော့မှာပဲ”
ကျွန်တော်လည်း မျက်လုံးမှိတ်ပြီး အာရုံတွေကို မနည်းပြန်စုစည်းရတယ်။ ပြီးမှ
“သမီးလေးကော . . . သမီးလေးကော . . မိန်းမ ”
“သမီးလေးရှိပါတယ် ကိုရဲ့ . . မေမေနဲ့အတူအိပ်နေတာပဲလေ။ အခု ကို အော်တဲ့ အသံကြားလို့ သမီးလေးကို ပုခက်ထဲ ခဏရွေ့ပြီး ပြေးဆင်းလာတာ။ ဘာတွေများ အိပ်မက်မက်ပြီး ယောင်နေတာလဲ။ အထိတ်တလန့်ရှိလိုက်တာ . . . ”
“ဟင် . . . ဟုတ်လား . . . ဒါဆို အားလုံးကို ကို အိပ်မက်မက်နေတာပေါ့ . . .
တော်ပါသေးတယ် . . မိန်းမရေ . . .နို့မို့ရင် သူငယ်ချင်းတွေကို အားနာစရာတွေ
ဖြစ်ကုန်တော့မယ် . . ”
“ဘာတွေများ အိပ်မက်မက်တာလဲ . . ကိုရဲ့ ”
“အိပ်မက်ထဲမှာ ကို က သမီးလေးကို ယောက်ျားပေးစားမလို့ . .”
“ကိုကလည်း . . . လုပ်တော့မယ်။ သမီးလေးက အခုမှ စကားတောင် ကောင်းကောင်းမပြောတတ်သေးတဲ့ဟာကို ”
“ဟား . . ဟား . . ဟား . . . အေးပါကွာ . . . ကဲ . . ကဲ . . သွားအိပ်နှင့်တော့
မနက်ကျမှပဲ အိပ်မက်ထဲကဇာတ်လမ်းတွေ မိန်းမကို အကုန်ပြောပြတော့မယ်
ဟား . . . ဟား . . .ဟား . . . ဟား . . .ဟား”
( UCSM First Batch မှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို
အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေကြောင်း . . . ။ )
Posted by MrDice at 8:16 PM 1 comments Links to this post
Labels: UCSM 1st Batch မှသူငယ်ချင်းများသို့
မန္တလေးကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ်မှာတက်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံ လေးတွေကို ဒီဘလော့ဂ်မှာ အမှတ်တရ ရေးသားထားပါတယ်။
xxxxx စာဖတ်နေကြသူ xxxxx